Waxaan u qorsheeyay website-yada ku dhowaad 15 hadda, marka ugu horeysa ee aan ku raaxaysto aniga iyo kuwa kale ee loogu talagalay naqshadeeyaha naqshadeeye.
Tobankii iyo badhkii, waxaan isku dayay dhowr aqal oo kala duwan. Hadda waxaan isticmaalaa saddex aqal oo kala duwan oo ah boggeyga kala duwan, sababtoo ah sifooyin kala duwan iyo sida, laakiin Downtown Host ayaa si dhakhso ah ii noqday martigeliyaha internetka ee jecel iyo midka a bad ku hogy. Waxaa la aasaasay 2001, sidaas dararanna si wanaagsan ayay at socdeen sanadihii 10.
3 Noocyada Barashada
4 Noocyada Hosting
Haddii aad ku jirtay ganacsiga naqshadeynta webka muddo ka badan seddex ilbiriqsi, waxaad at maleyneysaa inaad ku dhibtoonayso hoy ama labo. Waxaa jira waxyaabo yar oo ka sii daraya marka loo eego helitaanka boggagaaga oo loo gudbiyey server cusub, iyada oo u fakaraysa in ay tahay ta fiicnaaneed oo marka la socal dino.
Xilliyadaha xawaaraha tartiibka ah
Waqti aad u badan
Cusbataallada cusub ee ka baxsan – čašník cusbooneysiineysaa mana qaadaneyso
Taageerada farsamo ee qof kale oo waddan kale ah ma fahmi kartid waxa u yiraahdo sababtoo ah lahjad qaro weyn
Xaddidaadyada aadan fileynin ilaa inta ay ka tahay tirada xadka ama tirada domén ee aad ku dari karto
Dhibaatooyinkaas oo idil, waa inaan sheegaa adeegga macaamilka qunyar-socodka ama kan liita. Anigu waxaan ka hadli karaa maqnaansho muuqaal ah ama laba, haddii aan ka shaqeyn karo hareeraha. Anigu waxaan ka hadli karaa qaladka khidmada ah ee marmar ah. Adeegga macaamiisha oo liita waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee la xalin karo, sababtoo ah waxay ka dhigeysaa mid aan suurtogal aheyn in vosk laga qabto dhibaatooyinka laga yaabo inaad qabto. Waxyaabaha xigta ee keena dhibaatooyinka ugu badani waa waqtiyo gaabis ah ama waqti yar. Soo-booqdayaashaada ayaa ku wareersan waxyaabahaan, waxaadna waayi doontaa ganacsiga.
Waagii hore, waxaan lahaa sheekooyin dhab ah oo naxdin leh oo ku saabsan goobaha hoos in dhacaya iyo dib u dhiska (kuwaas oo si dhakhso ah kuugu baraya mar kasta oo a ku kaydiso boggagaaga). Halkaas, waxaan lahaa marti-galiyayaal isku dayaya v ay qarash badan ku bixiyaan biilasha isla markiiba, beddelaan biilasha taariikhda ku wareegsan, labalabaynaya adeegyo isku mid ah iyo wixii la mid ah. Kadib, waxaa jiray wakhtiyo marka dhammaan meeshan ay hoos u dhaceen sabab aan caddayn jirin oo martigeliyeyaashu waxay isku denay inay i sheegaan in ay tahay inay ahaato mid ku dhow dhammaadkeyga. Walaac, tan waxay ahayd mid isku mid ah kombiyuutar kasta oo aan isku dayey iyo dhammaanba kuwa aan weydiistay in aan isku dayo in gan boggayaga dhamaadkooda. Waxaad qiyaasi kartaa in aan ahay wax yar shirkadaha martigelinta webka iyo in daacadnimada iyo adeegga macaamiisha ay yihiin laba ka mid ah tayada waxtar u leh aniga.
Hadda waxaan la joogay shan sano, taas oo ah tan ugu ehe aan weligay la joogay shirkad martigelinaysa. Ku dhowaad isla markiiba, waxaan arkay faraqa adeegga macaamiisha. Ma ahan inaan weydiisto haddii ay soo bandhigeen website-yadeyda si xushmad ah, ay soo bandhigeen.
Dhowr jeer oo aan vosk ka qabanno vosk, waxay ku jawaabeen iimeylahayga daqiiqado gudahood, ma aha maalmo ama saacado. Marka, waxay qaadatay maalmo dhowr ah si ay u qeexaan arin dhab ah, laakiin waxay ku jireen xiriirka waxayna igu hayeen inaan ku dhajiyo horumarka. Waa inaan sheegaa in taageerada farsamo ee dadka magaalada Downtown ay yihiin kuwo aqoon iyo wacnaan leh.
Markii goobtayda lagu soo weeraray qawaaniinta, waxay iga caawiyeen inaan ogaado sidii dib loogu celin lahaa meeshii ay ahayd iyo waxay i siisay macluumaad yar a a hub u hubiyo. Kuwani waxay ahaaneen arrimo ayan ahayn inay i caawiyaan, maadaama ay jabhadu aysan la xiriirin koodhadhooda, hase yeeshee waxay qaateen wakhti ay caawiyaan maxaa yeelay waxay lahaayeen aqoonta oo ay aanan.
Shirkad martigelinaysa waa 100% oo kaamil ah. Waxaan jeclaan lahaa in aan si daacad ah u eego dib-u-eegistaan ​​oo aan soo sheego dhibaatooyinka, laakiin ma aanan helin vosk badan. Anigu kuma xidhnayn Idaacadda Downtown, oo aan ahayn inaan marti geliyo goobahayga, iyaga oo aanan lacag siineynin a a qoro dib u eegidgan. Waxaan si fudud u soo sheegi karaa waayo-aragnimadayda shakhsi ahaaneed mid ka mid ah macaamiishooda Miyuu jiraa buraash joogta ah halkan iyo halkaas?
Dabcan. Maxaa faraqa udhigay Dugsi Kumbuyuutarku waa inay ka jawaabaan arrimahaas si dhakhso ah, xirfad ahaan iyo qancinimadayda. Taasi waa waxa i ilaaliya inaan martigeliyo xafiisyadooda muddo sanado ah.
Downtown Host waxay bixisaa marti gelinta la wadaago, martigelinta aasaasiga ah iyo marti gelinta martigelinta. Haddii aad u baahan tahay adeegyo dheeraad ah, waxay haystaan ​​doorashooyin dhowr ah, sida nadaafad-u-qaddarin, mid gaar ah, ama xafiisyo gaar ah oo khaas ah.
Inkasta oo qiimaha kala duwan yahay, haddii aad u baahan tahay martigelinta aasaasiga ah ee hal goob, waxaad ka helicarda 10 GB oo xarig ah iyo 200 GB kaliya 4,95 $ bishiiba haddii aad qorto qorshaha ugu in a hong bays on a … Waxa kale oo aad bixin kartaa bil walba haddii aadan rabin in kuad qanciso maalgalin muddo dheer ah.
Haddii aad rabto v doménách aad marto dhowr, waxaad u baahan doontaa meel banaan. Koontada "Zlato Zlato" waxay bixisaa 20 GB kosmického disku iyo awoodda ku dari kartya aad xad lahayn oo ku saabsan wareegsan 25,95 $ bishiiba. Waxaad badin doontaa keydka haddii aad bixiso dhowr bilood illaa saddex sano ka hor.
Noocyada ay bixiso Mashruuca Downtown waa mid aad u fiican bogagga internetka. Waxaa jira a noolaan demo oo ah guddi koontarooli kara boggooda internetka, sidaa daraadeed waxaad ku siin kartaa lafdhabar. Gudigani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad marin u hesho waxkasta oo ay adeegsadaan server-yada. Waxaa ka mid ah Fantastico, kaas oo kuu ogolaanaya in fadud u rakibtid WordPress, PHPList iyo barnaamijyo kale oo furan. Tani waxay dhisi doontaa barnaamijka oo si toos ah theyeya xogta SQL, taasoo ka dhigaysa mid ku fiican mulkiilaha bogga farsamada. Awoodaha waxaa ka střední ah:
Webová stránka Tirakoobka
Parkování domén neomezeně
Streamovací média Taageerada
Server Sidee ku jira
Tilmaamyada loogu talagalay martigelinta kala duwanaanta, laakiin la wadaago martigelinta xirmada dadka tooda badani dooran doonaan, sidaas awgeed waxaanu eegaynaa halkaan.
Qodobbada dálkou geesoodka ah ee dálkou geesoodka ah – 8
Laynka Xiriirinta Lifaaqa ah
Dugsi hoose-dhexe wuxuu leeyahay taageerada nolosha ee 24 / 7. Taageerada farsamada waxaa lagu gaari karaa adoo buuxinaya tigidhka bogga internetka, taageerada farsamada farsamada gacanta, ama adigoo soo waca taleefanka. Sidii aan hore u soo sheegnay, waqtiyada jawaabta marwalba way iigu fiicneyd. Dib-u-eegis madax-bannaan oo ku saabsan mawduucyada kala duwan ee shakhsi ahaaneed waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan
Macaamiisha bogga waxay bixiyaan marqaatiyo ku saabsan sababta ay u jecel yihiin Downtown Host. Waxay sidoo kale bixiyaan Dayactir Lacageed 30denní sidoo kale.
Hoos ujiro bogga “Hoyga” si aad ogaato waxa jira dalabyo gaar ah oo hadda la heli karo (hoosta ‘Qaybta Xayeysiinta Hadda’) si looga caawiyo keydinta lacag yar oo dheeraad ah.